३ जनाका पाँचवटा खुट्टा किन देखिए ट्वाइलेट भित्र ?
त्यो ट्वाइलेट भित्र के भैरहेको छ हँ रु शौचालयभित्र त एक पटकमा एकजना मानिसमात्र छिरेको हुनुपर्नेहो वा एक पटकमा दुइ खुट्टा मात्र देखिनुपर्ने हो । तर यहाँ त पाँच वटा
दैनिक ५० हजारभन्दा बढी कमाउछन समलिंगी यौनकर्मी
दुनियामा धनी बन्ने चाहना सबैको हुन्छ र यो चाहना पूरा गर्न धेरैले धेरै थरि बाटो अपनाउँछन् । एकजना समलिंगी यौनकर्मीले आफुलाई बेलायतको सबैभन्दा बढि कमाउने यौनकर्मी बनाउन सफल भएका मात्र
३ सय ९६ करोडमा बिक्यो यो कचौरा !
हंङकङमा हालै एउटा कचौरा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँमा लिलाम भएको छ । कचौराको मूल्य ९३८ मिलियन डलर० ३ सय ९६ करोडमा लिलामी भएको हो । यो सामान्य खालको कचौरा होइन
नयाँ दिल्ली, (एजेन्सी) भारतमा अझैसम्म पनि समाजमा महिलाहरुको रजस्वलाबारे खुलेर कुरा गरिन्न। त्यस्तो देशमा मासिक स्रावका बेला महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको संकलन गर्ने विचारलाई कसरी लिइन्छ होला भनी
२१ वर्षकी युवतीले १ लाख पुरुषसँग ओछ्यान तताउने
उद्देश्य के लिनु ? उडि छुनु चन्द्र एक भन्ने गरिन्छ हामी कहाँ । तर पोल्याण्डकी एक युवतीले भने उडेर चन्द्रमा छुने भन्दा पनि अझै कडा जस्तो लाग्ने उद्धेश्य लिएकी छिन्
अस्पतालले उपचारमा लापरवाही गरेर विरामीको मृत्यु भएको वा अवस्था झनै खराब भएको भन्दै तोडफोड र मुद्दा मामिला भएका घटना त हाम्रोमा पनि हुन्छन् । तर क्यानडामा एउटा अस्पतालमाथि यस्तो मुद्दा
सलमानको यौन प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेकी कंगनाले रणवीरलाई प्रस्ताव राखेपछि हंगामा
मुम्बइ। रणवीर कपुरलाई यौन प्रस्ताव गरेको खुलासासँगै चर्चामा रहेकी हिरोइन कंगना रनोटको अर्को रहस्य पनि बाहिरिएको छ । उनले सलमानको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा सलमानले उनलाई गाली गरेको अर्को इमेलमा खुलासा
मलद्वारभित्र १ किलो सुन भेटिएपछि
तस्करहरुले तस्कर गर्नका लागि अनेक प्रकारका तरिका रचेका हुन्छन् । हुँदाहुँदा तस्करहरुले मलद्वारभित्र लुकाएर सुनको तस्करी गर्न थालेको पाइएको छ । हालै एक श्रीलंकाली पुरुषलाई प्रहरीले कोलम्बो एयरपोर्टमा पक्राउ गर्यो
कसैले प्रयोग गरेर फ्याँकेको कट्टुको मूल्य कति होला ? वास्तवमा यो कुनै सोध्ने प्रश्न नै होइन, किनकि त्यस्तो मूल्यहीन वस्तु रद्दीका लागि मात्र योग्य हुन्छ । तर जर्मनीका चर्चित तानाशाह
मोनालिसाको नाङ्गो तस्वीर भेटियो !
लियोनार्दो दा भिन्चीले बनाएको मोनालिसाको मन्द मुस्कानवाला तस्वीर हामी सबैले देखेकै छौँ । यो तस्वीरमा मोनालिसाको हाँसाको रहस्य पत्ता लगाउनै रस्साकस्सी भैरहेको बेला मोनालिसाको अर्को तस्वीरको रहसय फेला परेको छ
प्रदर्शनीमा राखिएका सेक्स डल देखेर दर्शक उत्तेजित
मानिस कतिबेला कुन हदसम्म जानसक्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्नपनि गाह्रो हुन्छ । अष्ट्रियामा भएको एउटा घटनाले यस्तै बताउँछ । त्यहाँ भएको एक प्रदर्शनीमा मानिसहरु सेक्स डल देखेर एकाएक उत्तेजित भए
काठमाडौं । पूर्वी अफ्रिकामा यस्तो जाति छ, जसले छोरी मान्छेको योनी सिलाइ दिन्छन् । छोरी मान्छेले विवाह अगाडि यौन सम्पर्क नगरुन भनेर उनीहरुको योनी सिलाइन्छ। यसरी योनी सिलाउँदा युवती विभिन्न
यौन दुर्व्यवहारका कारण चलचित्र निर्माताको सदस्यता खारेज
हलिउडका प्रख्यात चलचित्र निर्माता हार्बी वाइन्सटिनमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि ओस्कारका आयोजकहरुले उनको भुमिका अब के हुने भन्नेबारे आपतकालीन बैठक गर्दैछन्। मोसन पिक्चर आर्ट्स एण्ड साइन्सेसले वाइन्सटिनविरुद्धका यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरु
यी हुन् विश्वका खतरनाक ५ तानाशाह, जसले गरे यस्ता हर्कत
विश्वमा धेरै तानाशाहरुको जन्म भयो छ । केही तानाशाहरूले लाखौं मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याए र केहीले मानिसको अधिकारहरु खोसेर राज्य गर्ने गरेको पाईन्छ । तानाशाहरुले राज गरेका भएमात्र त हुन्थ्यो
विश्वब्यापीरुपमै किशोरीहरु किन मोटाए ?
एउटा नयाँ अनुसन्धान अनुसार बितेको चार दशकमा बालबालिका र किशोरकिशोरीमा मोटोपनाको मात्रा दश गुणाले बढेकोविश्व मोटोपना दिवसको दिन बुधबार ल्यान्सेट विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ जसको अर्थ हुन्छ विश्वभर १२ करोड
विवाह गर्न भन्दै धर्ना बसेकी मोदीकी मिरा यीनै हुन् !
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विवाह गर्न भन्दै एक महिला धर्ना बसेकी छन् । राजस्थानको जयपुरमा बस्दै आएकी ओम शान्ति शर्माले नरेन्द्र मोदीसँग विवाह गर्ने आफ्नो इच्छा पूरा गर्न
विश्वका नामुक खतरनाक तानाशाहको कुण्डली !
काठमाडौं । विश्वमा धेरै तानाशाहरुको जन्म भयो । तानाशाह शव्द नै मानिसहरुका लागि डराउनका लागि काफी छ । केही तानाशाहरूले लाखौं मानिसलाई मृत्युको मुखमा पु-याए र केहीले मानिसको अधिकारहरु खोसेर राज्य
७२ रुपैयाँमै आलिसान घर किन्न पाइने !
काठमाडौं । पत्याउनु हुन्न ? पत्याउनुहोस् । त्यो पनि कुनै गरिब देशको अनकन्टार दुर्गम ठाउँमा होइन । इटालीका चारवटा इलाकामा त्यहाँको सरकारले केवल ७२ रुपैयाँमा घर किन्नका लागि अफर गरेको
पेट दुख्ने समस्या नभएका मानिस सायदै होलान्। गम्भीर रुपमा होस् या सामान्य प्रकारको नै किन नहोस् पेट दुख्ने समस्या सबै मानिसले भोगेका हुन्छन्। त्यसैले पेट दुख्नुलाई धेरैले सामान्य रुपमै लिने
गाई र भैंसीको दुध मध्ये कुन स्वास्थ्यबर्धक होला ? हामी सबै अन्योलमा पर्छौ । देख्दा दुवै उस्तैं छन्, स्वाद पनि उस्तैं उस्तै हुन्छ । तर, गाईको दुधको तुलनामा भैंसीको दुध